” Galmudug Maddi ayey aheed in mudo ah balse Caawa ayey ka baxday” +Sawirro+Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
” Galmudug Maddi ayey aheed in mudo ah balse Caawa ayey ka baxday” +Sawirro+Cod
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa galabta nasiib u yeeshay in uu soo gaaro magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle uuna goob joog ka noqdo Doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Hirshabelle.
Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo doorashada kadib hadal kooban jeediyay ayaa soo dhaweeyay maamulkan cusub ee kusoo biiray maamulada Federaalka ee dalka ka jira, waxa uuna hambalyo u diray Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka la doortay.
Waxa uu sheegay Madaxweynaha Galmudug in ay si gaar ah ugu faraxsan yihiin maamulkan cusub ee Hirshabelle, waxa uuna tilmaamay in maamulkooda uu mudo maddi ahaa balse uu caawa ku faraxsan yahay in walaakooda dhashay .
”Caawa farxad gaar ah ayey ii tahay , Maamulka Galmudug Muddo ayuu maddi ahaa balse caawa walaalkood ayaa dhashay ,Maah maah Soomaaliyeed ayaa oraneysa in Walaal macaan yahay ninkii Maddi ah baa og, , Waxaan leenahay soo dhawaada Madaxda cusub ee maamulka Hirshabelle ee la doortay” Ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug ayaa qiray in doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar ee lagu doortay Masaxda maamulka Hirshabelle in ay aheed doorasho xalaal ah, waxa uuna guul u rajeeyay maamulka Hirshabelle ee kusoo biiray maamulada Federaalka ee dalka ka jira.